Ụmụ nwanyị na ndị nwe obodo. Nabata na klkoff maka 2018. Ọ nwere ike ịmalite ugbu a! (mepụtara) - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2019
Ụmụ nwanyị na ndị nwe obodo. Nabata na klkoff maka 2018. Ọ nwere ike ịmalite ugbu a! (mepụtara)
Lee ya ebe a. Ahịa 1 nọmba 2018. Naanị ichere ruo mgbe ị nụrụ njo ahụ nke na-apụta n'afọ ọzọ! (mepụtara)
Ụmụ nwanyị na ndị nwe obodo. Kwadebe maka ihe omume n'adịghị ka ọ bụla ị hụworo. Ị na-achọ inweta akụkụ kachasị mma nke 2017 na 2018 (mepụtara)